Global Voices teny Malagasy » Iran: Fihetsiketsehana Noho Ny Fandraràna Gazetiboky Momba Ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Oktobra 2017 17:48 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta
(Marihana fa efa tamin'ny volana Febroary taona 2008 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Noraràn'ny governemanta Iraniana roa herinandro lasa izay ny Zanan Magazine  (midika hoe “gazetim-behivavy”), taorian'ny 16 taona nivoahany. Tato anatin'ny taona vitsy, nofoanan'ny manampahefana Iraniana ny fahazoan-dalana an'ireo gazety sy gazetiboky marobe, saingy ny fanakatonana an'i Zanan no tena niteraka fanoherana lehibe tao amin'ny firenena sy iraisam-pirenena.
Maherin'ny 120 ireo mpampianatra ambony sy mpikatroky ny zon'olombelona tahaka an'i Noam Chomsky , Jürgen Habermas , Betty Willams , sy Shirin Ebadi  nanasonia taratasy manohitra ny fandraràna ary nandefa izany tany amin'ny mpitondra Iraniana.
Maherin'ny 1000 kosa ireo mpanao gazety Iraniana, manam-pahaizana, sy olo-malaza ara-kolontsaina ao Iran sy any ivelany izay nanoratra taratasy mitovy amin'izany ary nidera ny andraikitr'i Zanan tao Iran. Nanomboka nanao fanentanana hetsi-panoherana  ihany koa ny Human Rights First.
Zavatra iray azontsika tsoahina amin'ity tantara ity, na dia eo aza ny sivana 27 taona, dia mbola tsy hentitra ny olona. Nitatitra ity resaka ity tamin-kafanam-po sy tamin'ny fanavaozam-baovao saika ara-potoana ireo bilaogera sasany.
Araka ny tatitry ny New York Times avy any Iran, nilaza ny manampahefana fa “loza mitatao amin'ny fiarovana ara-tsain'ny fiaraha-monina” ity gazety ity satria nampiseho vehivavy Iraniana tamin'ny “hazavana mainty”.
RazeNo  (Syamak Ghasemi) koa nitatitra ity tantara ity hatramin'ny voalohany ary tsy mizara ny heviny fotsiny fa manome rohin'ny gazetiboky sy bilaogy hafa miresaka momba ny fiafaran'ny Zanan ho an'ireo mpamakiny ihany koa.
Hoy ilay bilaogera:
This magazine after 16 years history and publishing more than 150 issues was shutdown as simple as this. I wish courage for Shahla Sherkat, the editor of Zanan, to continue her struggle against ignorance and oppression.
Nakatona tsotra izao fotsiny ity gazetiboky ity taorian'ny tantara 16 taona sy famoahana lohahevitra maherin'ny 150. Mankahery an'i Shahla Sherkat, tonian-dahatsoratry ny Zanan aho, mba hanohy ny tolony manohitra ny tsy fahalalana sy ny famoretana.
Namoaka sary rakotra (azo jerena etsy ambony) tamin'ny iray tamin'ireo lohahevitry ny Zanan izay mety ho antony nanakatonana ny gazety ihany koa ity bilaogera ity. Hoy ny vakin'ny sary rakotra : “Maty hamono ry zareo”. Lahatsoratra momba ireo vehivavy Iraniana mitady ho martiora izany.
Razeno indray nanampy fa notaterina sy nohadihadian'ny Zanan ny endrika samihafa amin'ny sata sy ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina Iraniana ka nalaza teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Nanoratra  i Futurama fa tsy nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny governemanta ny Zanan nandritra ireo taona rehetra ireo ary tena iray amin'ny zava-bitan'ny vehivavy ny gazety. “Toa ny zava-nitranga tamin'ity gazety ity no mahazo ireo gazetiboky sy gazety tsy miankina rehetra eto amin'ny firenena. Saingy ny fanontaniana dia hoe aiza no hiafaran'izany hetsika izany?”
Asieh Amini nisafidy  lohateny hoe “Fanatanterahana ny Teny (Execution of Word)” tamin'ny lahatsorany.
Hoy izy nilaza tamim-piesoesoana:
Zanan just reflected women’s voices in the magazine, and they are women who threated the so called psychological security of society.
Naneho ny feon'ny vehivavy fotsiny tao amin'ny gazetiboky ny Zanan, ary vehivavy ireo lazaina fa nandrahona ny fiarovana ara-tsain'ny fiarahamonina.
Namoaka sary sasantsasany misy ny lanonana farany fanomezam-boninahitra ny tantara 16 taona ny gazetiboky ihany koa izy.
Shirin Ahmadinya indray nanoratra  amin'ny teny roa, fa tsy gaga izy ary manohy hoe, “Mihamalahelo kokoa izahay isan'andro.”
Kafe Naseri kosa nilaza  fa “niantso ny tenany ho gazetibokim-behivavy voalohany tao Iran ny Zanan raha mitovy amin'ny faniratsirana ny teny hoe feminisma ho an'ny maro.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/25/109149/
 Zanan Magazine: http://www.zanan.co.ir
 Noam Chomsky: http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
 Jürgen Habermas: http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
 Betty Willams: http://en.wikipedia.org/wiki/Betty_Williams_%28Nobel_laureate%29
 fanentanana hetsi-panoherana: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/Zanan
 Araka ny tatitry ny New York Times : http://www.nytimes.com/2008/02/07/opinion/07thu1.html?_r=2&scp=1&sq=zanan&st=nyt&oref=slogin&oref=slogin
 Namoaka : http://photo.razeno.com/2008/02/post_11.html